QM oo ergay Gaar ah u Magacowday Arrimaha Qoxootiga Somalia ee Dhadhaab – idalenews.com
QM oo ergay Gaar ah u Magacowday Arrimaha Qoxootiga Somalia ee Dhadhaab
Muqdisho(INO) — Qaramada Midoobay ayaa u Magacawday ergay gaar ah arrimaha qoxootiga Somalia ee ku jira xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya, si loo hubiyo amniga qoxootiga doonaya inay dalkooda dib ugu laabtaan, kaddib markii hay’adda HRW ay Kenya ku eedeysay inay si khasab ah qoxootiga ugu celinayso Somalia si ay u Xeryaha Dhadhaab u xirto.
Ergayga ay QM u Magacowday Arrimaha Qoxootiga Somalia oo ah – Danjire Maxamed Cabdi Afeey, ayaa sidoo ah xilligan haya xilka ergayga IGAD uga Wakiilka ah Arrimaha Soomaaliya.
Madaxa Hay’adda Qoxootiga Adduunka ayaa sheegay in ergaygan cusub ee la magacaabay ay shaqadiisu noqonaysaa sidii uu u hubin lahaa arrimaha ku aadan dib u celinta qoxootiga Soomaalida, uuna Galaan-gal ugu yeelan lahaa Arrimaha Qoxootiga Somalia ee Dhadhaab ku nool.
Sidoo kale, Magacaabida ergaygaan cusub ayaa waxay imaanaysaa xilli 31,000 oo Qoxooti Soomaaliyeed ay si iskood ah uga soo laabteen Somalia tan iyo Sanadkii 2014-kii, markaas oo ay Somalia, Kenya iyo Hay’adda UNHCR kala Saxiixdeen Heshiis Dib loogu celinayo qoxootiga Soomaaliyeed.
Dib u celinta Qoxootiga Soomaaliyeed ee ku jira Dhadhaab oo ahayd inaysan noqon mid si khasab ah ku timaadda, ayaa haddana waxaa Dowladda Kenya lagu eedeeyay dhawr jeer inay khasab ku celiso Qoxootiga.
Ugu dambeyn, Xukuumadda Kenya ayaa bishii May ee sanadkan 2016-ka ku dhawaaqday inay xiri doonto Dhadhaab, kaddib markii ay sheegeen in Weerarrada gudaha dalkeeda ka dhaca laga soo ababaulo xeryahaas.
Turkiga oo Saldhig uu ku tababarayo Ciidamada Somalia iyo kuwa Dalala Afrika ka furanaya Muqdisho
Faarax Macalin iyo wasiir hore oo Soomaali ah oo feer isku daaduumiyay